Duleedka magaalada Cadaado oo ciidamo maamulka Galmudug ka wada tirsani dagaal ku dhex maray – Madal Furan
Hoy > Warka > Duleedka magaalada Cadaado oo ciidamo maamulka Galmudug ka wada tirsani dagaal ku dhex maray
Duleedka magaalada Cadaado oo ciidamo maamulka Galmudug ka wada tirsani dagaal ku dhex maray
Cadaado (Madal Furan) – habeenimadii xalay ayaa ciidamo ka wada tirsan maamulka Galmudug waxaa dagaal ku dhex maray meel u dhow magaaladda Cadaado.
Iskudhacan ayaa la soo sheegayaa inuu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan Galmudug oo ka soo tagay magaalada Gaalkacyo iyagoo u socdaalayey magaaladda, waxayna goobjoogayaal sheegayaan in ay isku dhaceen ciidamo kale oo maamulka Galmudug ka tisan oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn magaaladda Cadaado.
Ugu yaraan Hal Askeri ayaa la xaqiijyey inuu dagaalkaas oo mudo kooban socday uu ku dhintay Laba kalana ay ku dhaawacmeen.
Baari la xiriira sababta dhallisay in ciidamadaasu wada dagaalamaan ayaa waxaa baaritaano ku wado masuuliyiin ka tirsan Maamulka Galmudug.
Muslimiinta dalka Kenya oo loogu baaqay in ay sameystaan ururo qaabilsan ururinta Zakada
Ma Runbaa in Somaliland yeelan doonto Suuq xor ah?
Taliyaha Ciidamada S/land oo sheegay inaysan mar danbe Puntalnd ku soo laaban doonin Tukaraq